Gịnị kwa nụ na-ebu mmadụ isi n’elu ụwa nke a ọtụtụ ihe gbagwojuru ya anya?
Ụmụ nne Abrahamụọgụ Aṅụsịobi Madụ. Anya mụ ahụla ihe! Anya mụ hụrụ elu igwe, mana ụkwụ mụ apụghị ịkpasa ya.
Anya mụ hụrụ ntụrụzịza ugwu ma na ọkpa mụ apụghị ịkpatụ ya.
Anya mụ na-ele anyanwụ anya ugbu a, mana aka mụ apụghị ịkpasa ya, nke ụkwụ mụ ji ga imetu ya.
Ndi jiri aha otu All Progressives Congress (APC) zọọ ọkwa onye isi oche na Steeti Edo enwetego nmeri n’okpuru ọchịchị asaa e nwere na steeti ahụ. Nke a mere site na ntuli aka nke ndị ụlọ ọrụ Independent Electoral Commission nke steeti ahụ haziri na nso a.